Yiba Nokholo Olungagungqiyo KuBukumkani | Funda
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISilozi ISpanish Intetho Yezandla yaseArgentina Intetho Yezandla yaseBrazil Intetho Yezandla yaseColombia Intetho Yezandla yaseItali Intetho Yezandla yaseMexico Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBengali IsiBhulu IsiBicol IsiBislama IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitonga (SaseMalawi) IsiChitumbuka IsiCibemba IsiCinyanja IsiCreole saseHaiti IsiCreole saseMauritius IsiCreole saseSeychelles IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiDrehu IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGrike IsiGuarani IsiGujarati IsiGun IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKannada IsiKazakh IsiKikaonde IsiKikuyu IsiKiluba IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKisi IsiKisonge IsiKongo IsiKorea IsiKrio IsiKwangali IsiKwanyama IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLunda IsiLuo IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMaltese IsiMarathi IsiMaya IsiMixe IsiMongolia IsiMoore IsiNdebele IsiNdonga IsiNepali IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiOromo IsiOssetia IsiOtetela IsiPangasina IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiQuechua (saseAncash) IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseBolivia) IsiQuechua (saseCuzco) IsiRashiya IsiRomania IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwati IsiSwedish IsiTagalog IsiTajiki IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshiluba IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTurkmen IsiTurkmen (SesiCyrillic) IsiTwi IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUrdu IsiUzbek IsiVenda IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiWayuunaiki IsiWolaita IsiXhosa IsiZande IsiZulu isi-Igbo isiWallisian
Usebenzisa isicangca esinomxholo othi “ Indlela UThixo Aza Kuyiphumeza Ngayo Injongo Yakhe,” chaza injongo . . .
yesithembiso esenziwa e-Eden.
yomnqophiso ka-Abraham nokaDavide.
yomnqophiso wombingeleli onjengoMelkitsedeki.
1, 2. Yintoni eza kusenza seyiseke ukuba uBukumkani buza kuyizalisekisa injongo anayo uThixo ngabantu, ibe kutheni? (Jonga umfanekiso osekuqaleni.)
NJENGAMANGQINA kaYehova, siqhele ukuthi uBukumkani bukaThixo kuphela kwento eza kulungisa iingxaki zabantu, ibe sikhuthaza abantu ukuba bayikholelwe le nyaniso iseZibhalweni. Sithuthuzelwa nalithemba esinalo loBukumkani. Noko ke, seyiseke kangakanani ukuba uBukumkani bobokwenene yaye buza kuyiphumeza injongo yabo? Sinasiphi isizathu sokuba nokholo olungagungqiyo kwithemba loBukumkani?—Heb. 11:1.
2 UBukumkani obungoMesiya lilungiselelo elasekwa nguSomandla ngokwakhe ukuze aphumeze injongo yakhe ngendalo. UBukumkani bunesiseko esingenakugungqiswa—ilungelo lokulawula likaYehova. Iinkalo ezibalulekileyo zobu Bukumkani—ukumkani wabo, abantu aza kulawula nabo kunye negunya abanalo—ziye zamiselwa ngokusemthethweni kusetyenziswa iminqophiso, izivumelwano okanye amalungiselelo awenziwa nguThixo okanye uNyana wakhe, uYesu Kristu. Ukucinga ngale minqophiso kuza kusinceda siyiqonde indlela eza kuzaliseka ngayo injongo kaThixo size sibone nendlela eliluqilima ngayo eli lungiselelo.—Funda amaEfese 2:12.
3. Yintoni esiza kuthetha ngayo kweli nqaku nakwelilandelayo?
3 IBhayibhile ithetha ngeminqophiso emithandathu enokuthanani noBukumkani obungoMesiya obulawulwa nguKristu Yesu. (1) Ngumnqophiso ka-Abraham, (2) umnqophiso woMthetho, (3) umnqophiso kaDavide, (4) umnqophiso wombingeleli onjengoMelkitsedeki, (5) umnqophiso omtsha (6) nomnqophiso woBukumkani. Makhe sithethe ngendlela umnqophiso ngamnye odibana ngayo noBukumkani nendlela onceda ngayo ekuphumezeni injongo kaThixo ngomhlaba nabantu.—Funda isicangca esinomxholo othi “ Indlela UThixo Aza Kuyiphumeza Ngayo Injongo Yakhe.”
ISITHEMBISO ESITYHILA INDLELA EZA KUZALISEKA NGAYO INJONGO KATHIXO
4. Njengokuba iGenesis isitsho, ziziphi izinto ezintathu ezathethwa nguYehova ngabantu?
4 Emva kokulungisa umhlaba wethu ukuze abantu bakwazi ukuhlala kuwo, uYehova wathetha izinto ezintathu ngabantu: Wayeza kubadala ngokomfanekiselo wakhe, babeza kuyandisa iParadesi baze bazalise umhlaba ngenzala engamalungisa, ibe babengavunyelwanga ukuba batye kumthi wokwazi okulungileyo nokubi. (Gen. 1:26, 28; 2:16, 17) Yayingekho enye into eyayifuneka. Emva kokudalwa kwabantu, ekuphela kwento eyayifuneka ukuze injongo kaThixo izaliseke, kukuba bathobele loo miyalelo mibini. Kwenzeka ntoni ukuze kufuneke iminqophiso?
5, 6. (a) USathana wazama njani ukuthintela injongo kaThixo? (b) Waphendula wathini uYehova kucelomngeni olwenziwa nguSathana e-Eden?
5 Ezama ukuthintela injongo kaThixo, uSathana uMtyholi waqalisa imvukelo. Wakwenza oku ngokunikela ingqalelo kumyalelo awabonayo ukuba angawuphembelela lula—lowo wawufuna ukuba abantu bathobele. Wahenda umfazi wokuqala, uEva, ukuba angawuthobeli umyalelo owawusithi bangatyi kumthi wokwazi okulungileyo nokubi. (Gen. 3:1-5; ISityhi. 12:9) Ngaloo ndlela, uSathana wacel’ umngeni ilungelo likaThixo lokulawula indalo yakhe. Kamva, uSathana watyhola abakhonzi bakaThixo abathembekileyo ngokuzingca.—Yobhi 1:9-11; 2:4, 5.
6 UYehova wayeza kuphendula athini kucelomngeni lukaSathana awalwenza e-Eden? Ewe kona, ukutshabalalisa abo bavukeli kwakuza kuyiphelisa tu imvukelo yabo. Kodwa kwakuza kuthetha nokuba injongo kaThixo yokuzalisa umhlaba ngenzala ethobelayo ka-Adam noEva yayingazi kuzaliseka. Kunokuba abatshabalalise ngoko nangoko abo bavukeli, uMdali osisilumko waphendula ngesiprofeto esibalulekileyo—isithembiso sase-Eden—ukuze aqinisekise ukuba onke amazwi akhe ayazaliseka.—Funda iGenesis 3:15.
7. Isithembiso esenziwa e-Eden sisiqinisekisa ngantoni ngokuphathelele inyoka nembewu yayo?
7 UYehova wasebenzisa isithembiso sase-Eden ukuze awise isigwebo kwinyoka nakwimbewu yayo, ezazimela uSathana uMtyholi nabo bonke abantu ababeza kuma ngakwicala lakhe kumbandela welungelo likaThixo lokulawula. UThixo oyinyaniso wanika imbewu yomfazi wakhe osezulwini igunya lokutyumza uSathana. Ngaloo ndlela, isithembiso esenziwa e-Eden sasingapheleli nje ekusiqinisekiseni ukuba uSathana nawo wonke umonakalo awubangeleyo uza kutshabalala, kodwa sibonisa nendlela eza kwenzeka ngayo loo nto.
8. Yintoni esiyaziyo ngomfazi nangembewu yakhe?
8 Yayiza kuba ngubani ke le mbewu yomfazi? Ekubeni imele ityumze inyoka entloko, okanye ‘itshitshise’ uSathana uMtyholi, kumel’ ukuba le mbewu sisidalwa esingumoya. (Heb. 2:14) Ngoko, umfazi oyizalayo kwakuza kufuneka naye abe sisidalwa esingumoya. Ngoxa imbewu yenyoka yayisiya isanda, kwagqitha iminyaka ephantse ibe yi-4 000 engaziwa umfazi nembewu yakhe. Ebudeni baloo minyaka, uYehova wenza iminqophiso eliqela eyachaza ukuba ngubani loo mbewu neyaqinisekisa abakhonzi bakhe ukuba uThixo wayeza kusebenzisa yona ukuze alungise wonke umonakalo owenziwa nguSathana ebantwini.
UMNQOPHISO OCHAZA IMBEWU
9. Uyintoni umnqophiso ka-Abraham, ibe waqalisa nini ukusebenza?
9 Emva kweminyaka emalunga namawaka amabini ewise isigwebo kuSathana, uYehova wayalela usolusapho uAbraham ukuba ashiye ikhaya lakhe eUre, eMesopotamiya aze aye eKanan. (IZe. 7:2, 3) UYehova wathi kuye: “Hamba umke ezweni lakowenu nakwizalamane zakho nasendlwini kayihlo, uye ezweni endiya kukubonisa lona; yaye ndiya kukwenza ube luhlanga olukhulu ndize ndikusikelele, ndilenze libe likhulu igama lakho; ube yintsikelelo. Yaye ndiya kubasikelela abo bakusikelelayo, ndize ndimqalekise lowo ukuqalekisayo, kwaye ngokuqinisekileyo ziya kuzisikelela ngawe zonke iintsapho zasemhlabeni.” (Gen. 12:1-3) Le yingxelo yokuqala ebhaliweyo ethetha ngomnqophiso ka-Abraham—owenziwa nguYehova uThixo. Asazi ukuba uYehova wawenza nini kanye kanye lo mnqophiso noAbraham. Noko ke, lo mnqophiso waqalisa ukusebenza ngo-1943 B.C.E., xa uAbraham owayeneminyaka eyi-75 wemka kwaHaran waza wawela uMlambo umEfrata.
10. (a) UAbraham wabonisa njani ukuba unokholo olungagungqiyo kwizithembiso zikaThixo? (b) Ziziphi iinkcukacha ezachazwa nguYehova ngokuthe ngcembe ngembewu yomfazi?
10 UYehova waman’ esiphindaphinda isithembiso awasenza kuAbraham, wongeza neenkcukacha ezingakumbi. (Gen. 13:15-17; 17:1-8, 16) Xa uAbraham wabonisa ukuba unokholo olungagungqiyo kwizithembiso zikaThixo ngokuvuma ukunikela ngonyana wakhe okuphela kwakhe, uYehova wawugxininisa umnqophiso ngokwenza isithembiso. (Funda iGenesis 22:15-18; amaHebhere 11:17, 18.) Emva kokuba umnqophiso ka-Abraham uqalisile ukusebenza, ngokuthe ngcembe uYehova wachaza iinkcukacha ezithile ngembewu yomfazi. Loo mbewu yayiza kuphuma kwinzala ka-Abraham, ibe nabantu abaninzi, ibe ngookumkani ize izisele abanye iintsikelelo.
UAbraham waba nokholo olungagungqiyo kwizithembiso zikaThixo (Funda isiqendu 10)
11, 12. IZibhalo zisibonisa njani ukuba umnqophiso ka-Abraham uzaliseka nangenye indlela, ibe oku kuthetha ntoni kuthi?
11 Umnqophiso ka-Abraham wazaliseka ngokoqobo kwimbewu yakhe xa yazuz’ ilifa iLizwe Lesithembiso. Noko ke, iZibhalo zibonisa ukuba lo mnqophiso wawuza kuzaliseka nangenye indlela. (Gal. 4:22-25) Njengokuba umpostile uPawulos wachazayo, kule nzaliseko yesibini, inxalenye ephambili yale mbewu ka-Abraham nguKristu, ize eyesibini inxalenye ibhekisele kumaKristu athanjisiweyo ayi-144 000. (Gal. 3:16, 29; ISityhi. 5:9, 10; 14:1, 4) Umfazi ovelisa le mbewu ‘yiYerusalem ephezulu’—inxalenye esezulwini yentlangano kaThixo, ebunjwa zizidalwa zomoya ezinyanisekileyo. (Gal. 4:26, 31) Kanye njengokuba umnqophiso ka-Abraham wathembisayo, imbewu yomfazi yayiza kuzisa iintsikelelo ebantwini.
12 Umnqophiso ka-Abraham usalathisa kuKumkani nakwabo baza kulawula kunye naye kuBukumkani bukaThixo, ibe sisiqinisekiso esisemthethweni soBukumkani basezulwini. (Heb. 6:13-18) Uza kusebenza ixesha elingakanani lo mnqophiso? IGenesis 17:7 ithi “ngumnqophiso wexesha elingenammiselo.” Usebenza de uBukumkani bukaMesiya butshabalalise iintshaba zikaThixo zize zonke iintsapho zomhlaba zisikelelwe. (1 Kor. 15:23-26) Abo baza kube bephila emhlabeni ngelo xesha baza kungenelwa ngonaphakade. Umnqophiso kaThixo noAbraham usibonisa ukuba uYehova uzimisele ukuyizalisekisa injongo yakhe yokuba abantu abangamalungisa ‘bawuzalise umhlaba’!—Gen. 1:28.
UMNQOPHISO OQINISEKISAYO UKUBA UBUKUMKANI BUYA KUHLALA BUHLELI
13, 14. Umnqophiso kaDavide usiqinisekisa ngantoni ngokuphathelele ulawulo lukaMesiya?
13 Isithembiso esenziwa e-Eden nomnqophiso ka-Abraham ziveza inkalo ebalulekileyo yokuba ulongamo lukaYehova lusekelwe kwimilinganiselo kaThixo elungileyo, ngoko noBukumkani bukaMesiya busekelwe kuloo milinganiselo. (INdu. 89:14) Ngaba urhulumente kaMesiya uya kuze onakale kuze kufuneke atshatyalaliswe? Kukho omnye umnqophiso osiqinisekisayo ukuba loo nto ayisoze yenzeke.
14 Khawuve ukuba uYehova wamthembisa ntoni uKumkani uDavide wakwaSirayeli esebenzisa umnqophiso kaDavide. (Funda eyesi-2 kaSamuweli 7:12, 16.) UYehova wawenza lo mnqophiso ebudeni bolawulo lukaDavide eYerusalem, emthembisa ukuba uMesiya wayeza kuphuma kwisizukulwana sakhe. (Luka 1:30-33) Ngaloo ndlela, uYehova wasikrobisa ukuba yayiza kuphuma kubani le mbewu waza wamisela ukuba indlalifa ethile kaDavide yayiza kuba ‘nelungelo elisemthethweni’ lokuhlala kwitrone yoBukumkani bukaMesiya. (Hez. 21:25-27) Ekubeni uYesu enguKumkani, ulawulo lukaDavide luza ‘kumiselwa ngokuqinileyo kangangexesha elingenammiselo.’ Imbewu kaDavide “iya kubakho de kuse kwixesha elingenammiselo, netrone yakhe ibe njengelanga.” (INdu. 89:34-37) Ulawulo lukaMesiya alusoze lonakale, ibe luza kwenza izinto eziya kuhlala ngonaphakade!
15-17. Ngokutsho komnqophiso wombingeleli onjengoMelkitsedeki, iza kukhonza njengantoni imbewu, ibe kutheni?
15 Nakuba umnqophiso ka-Abraham nokaDavide usiqinisekisa ukuba imbewu yomfazi yayiza kuba nokumkani, kwakuza kufuneka okungakumbi ukuze kuziswe iintsikelelo kubantu bazo zonke iintlanga. Ukuze basikelelwe ngokwenene, kwakuza kufuneka bakhululwe kwisono baze babe yinxalenye yentsapho kaYehova. Ngoko kufuneka le mbewu iphinde ibe ngababingeleli. UMdali wethu osisilumko wenza elinye ilungiselelo elisemthethweni, umnqophiso wombingeleli onjengoMelkitsedeki.
16 Esebenzisa uKumkani uDavide, uYehova wachaza ukuba wayeza kwenza umnqophiso noYesu ngeenjongo ezimbini: ukuze ‘ahlale ngasekunene kukaThixo’ de oyise iintshaba zakhe, nokuze abe ‘ngumbingeleli ukusa kwixesha elingenammiselo ngokohlobo lukaMelkitsedeki.’ (Funda iNdumiso 110:1, 2, 4.) Kutheni kusithiwa “ngokohlobo lukaMelkitsedeki”? Kungenxa yokuba kwakude kudala ngaphambi kokuba inzala ka-Abraham izuz’ ilifa iLizwe Lesithembiso, uMelkitsedeki, owayengukumkani waseSalem, ‘wayengumbingeleli wOyena Thixo Uphakamileyo.’ (Heb. 7:1-3) Wamiselwa nguYehova ngokuthe ngqo. Nguye kuphela ekuthethwa ngaye kwiZibhalo zesiHebhere owayengukumkani nombingeleli. Ngaphezu koko, ekubeni kungekho ngxelo yamntu owayenesi sikhundla ngaphambi nasemva kwakhe, kunokuthiwa ‘ngumbingeleli ngokungapheliyo,’ okanye ngonaphakade.
17 UYesu umiselwa ukuba abe ngumbingeleli kusetyenziswa lo mnqophiso owenziwa nguYehova kunye naye, ibe uya kuhlala ‘engumbingeleli ngonaphakade ngokohlobo lukaMelkitsedeki.’ (Heb. 5:4-6) Oku kwenza kucace ukuba uYehova uye wazibophelela ukuba uza kusebenzisa uBukumkani bukaMesiya ukuze aphumeze injongo yakhe ngabantu.
IMINQOPHISO SISISEKO ESISEMTHETHWENI SOBUKUMKANI
18, 19. (a) Iminqophiso esithethe ngayo isibonisa ntoni ngoBukumkani? (b) Nguwuphi umbuzo ekusafuneka uphendulwe?
18 Xa sijonga le minqophiso sithethe ngayo, sitsho siyibone indlela edibana ngayo noBukumkani bukaMesiya nendlela uBukumkani obusekelwe ngayo kwizivumelwano ezisemthethweni. Isithembiso esenziwa e-Eden sibophelela uYehova ukuba azalisekise injongo yakhe ngomhlaba nangabantu esebenzisa imbewu yomfazi. Yayiza kuba ngubani le mbewu, ibe yayiza kukhonza njengantoni? Umnqophiso ka-Abraham uyawuphendula loo mbuzo.
19 Umnqophiso kaDavide ucacisa ngakumbi ngomnombo wenxalenye ephambili yembewu uze uyinike ilungelo lokulawula umhlaba ukuze iintsikelelo eziza noBukumkani zibe ngunaphakade. Umnqophiso wombingeleli onjengoMelkitsedeki uvumela le mbewu ukuba ibe ngumbingeleli. Noko ke, uYesu akazi kuwenza yedwa umsebenzi wokuvusela abantu ekufezekeni. Kukho nabanye abathanjiselwe ukuba ngookumkani nababingeleli. Bavela phi? Loo mbuzo uza kuphendulwa kwinqaku elilandelayo.
INDLELA UTHIXO AZA KUYIPHUMEZA NGAYO INJONGO YAKHE
Isithembiso esenziwa e-Eden sichaza uBukumkani njengendlela eza kusetyenziswa ukuze kuzaliseke injongo kaThixo ngomhlaba nangabantu. Le minqophiso mithandathu ilandelayo incedisa ekuzalisekiseni injongo kaThixo:
UBANDAKANYA: UYehova noAbraham
INJONGO: Sisiseko esisemthethweni sokuba ‘imbewu yomfazi’ ekuthethwe ngayo kwiGenesis 3:15 iza kulawula eBukumkanini
UBANDAKANYA: UYehova namaSirayeli okoqobo
INJONGO: Ukhusela ‘imbewu’ uze ukhokelele abantu kuMesiya
UBANDAKANYA: UYehova noDavide
INJONGO: Ubonisa ukuba uKumkani onguMesiya uza kuphuma kumnombo kaDavide yaye yonke into obuyiphumezayo uBukumkani iya kuba ngonaphakade
UMNQOPHISO WOMBINGELELI ONJENGOMELKITSEDEKI
UBANDAKANYA: UYehova noYesu
INJONGO: Lilungiselelo elisemthethweni lokuba uYesu—oyinxalenye ephambili ‘yembewu’ yomfazi—abe ngukumkani nombingeleli ngonaphakade
UBANDAKANYA: UYehova noSirayeli wokomoya
INJONGO: Sisiseko esisemthethweni sokuba amaKristu ayi-144 000 athengwe njengoonyana bakaThixo aze abe yinxalenye yesibini ‘yembewu’
UBANDAKANYA: UYesu noSirayeli wokomoya
INJONGO: Udibanisa ngokusemthethweni amaKristu athanjisiweyo noKristu ukuze babe ngookumkani nababingeleli ezulwini